प्रदेशसभा सांसदहरूले भने, ‘‘बजेट असन्तुलित भयो’’ – Enayanepal.com
प्रदेशसभा सांसदहरूले भने, ‘‘बजेट असन्तुलित भयो’’
२०७६, २३ असार सोमबार मा प्रकाशित
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित भएको सभामा सांसदहरूले भने, ‘‘बजेट असन्तुलित’’ बताएका छन् ।
‘‘बजेटमा पुरानै कुरा आयो, बजेट असन्तुलित भयो ।’’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले भने, ‘पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी बजेट गयो ।’’
उनले तालिम, गोष्ठीले कर्णालीमा सम्बृद्धि आउला र भन्दै सरकारप्रति व्यङ्ग्य दिए ।
नेकपाकै अर्का सांसद ठम्मरबहादुर बिष्टले सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्रमा तीन समानुपातिक सांसदले विद्यालय छानेको तर आफ्नो ठाउँमा नछानेको किन भन्दै प्रश्न गरे । ‘‘समानुपातिक १६ जना, २२ विद्यालय कसरी परे ?’’ यसलाई सुधारेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘‘हामी सके बलिदानै दिनुपर्ने भो नभए हामी घाइते त पक्कै हुन्छौँ ।’’
असन्तुलित बजेट आएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘सभामुखज्यू सुरक्षाको व्यवस्था होस् ।’’ उनले आवश्यकताअनुसार योजना छान्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीको जिल्लामा मात्रै पूर्वाधारका योजना छनौट हुनु राम्रो हो त ?’’
सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले डिजिटल होम स्टे भनेको के हो भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको बजेट ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी
हाँस्नु प¥या छ’ भन्ने बोलको गीत गाएर सरकारको विरोध गरे ।
उनले मुगु जिल्लामा पर्याप्त बजेट नभएको बताए । उनले के यही दिन देख्न त्यत्रो संघर्ष भएको हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले जनतालाई दुःख दिनको लागि लडाइँ लडिएको महसुस भएको बताए ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले कृषि मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयको रुपमा
नआएको आरोप लगाए । ‘‘कृषिले सडक खन्ने, सिंचाई बनाउने हो की कृषि पेशालाई थप उत्पादनशील बनाउने हो ?’’
उनले भने, ‘‘किसानको जीवनस्तर माथि उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुहोस् ।’’ सांसद अमृता शाहीले तीन ओटा बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कहिले अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने हो भनी प्रश्न गरिन् ।
अर्का सांसद रातो कामीले बजेट भावनात्मकरुपमा आएको बताए ।
सांसद झोवा वि.क.ले सरकारले कहिले रातो किताब, कहिले हरियो किताब, कहिले सेतो किताब ल्याएर के सन्देश दिन खोजेको हो भनिन् ।
उनले खाली किताब मात्रै ल्याउने, कार्यान्वयन नगर्ने कुरा ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’जस्तै भएको बताइन् ।
सांसद मिनासिंहरखालले बजेट वितरणमुखी भएको बताइन् । उनले हरेक माननीयलाई ४० लाख दिएर अति विपन्न परिवारलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिएला भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरिन् ।
सांसद धर्मराज रेग्मीले सदनले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने अधिकार सरकारको नभएको बताएका छन् । ‘‘नीति तथा कार्यक्रम सरकार र सदनले पारित गर्ने ध्यान नदिने ? अनि सदनलाई मजाक बनाउने अधिका र कसले दियो सरकारलाई ?’’ उनले भने, ‘‘सरकारले मनलाग्दी गर्न पाईन्छ ?
लोकतन्त्रमा संसद बलियो हुन्छ कि हुँदैन ?’’